Injifannoowwan Caamsaa 20 Ummata Oromoo fayaydamaa taasisaa jiru-Ob Muktaar Kadir – Welcome to bilisummaa
Injifannoowwan Caamsaa 20 Ummata Oromoo fayaydamaa taasisaa jiru-Ob Muktaar Kadir
Finfinnee Caamsaa 13 2006(FBC)Adeemsii sirna dimookraatawa,nageenyaafi bulchiinsa gaarii har’a mula’ataa jiruu qabsoo hadhaawaa waggootii dheeraa injifannoo caamsaa 20 bar 1983n argamee tahuu pireesidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo biyyoolessaa oromiyaa obboo Muktaar Kadir ibsan.
Obbo Muktaar injifannoo caamsaa 20 waggaa 23ffaa sababeeffachuun kaleessa ibsa baga geessanii wayita dabarsaniittii mirgoota eenyummaa argamaniin cinatti hawwiifi dheebuu misoomaa ummataa guutuuf waggoottii 23n darbannii bu’uurrii cimaa kan itti ka’amee fi adeemsii dheeraas itti deemamuusaadha kan ibsan.
caamsaa 20n ummanni Oromoo mirga aadaa,afaaniifi seenaasaa dagaagifachuu,misoomaafi qabeenyya naannichaarraa fayyadamuu waggootii dheeraaf dhabee ture goonfachuusaa ibsanii kanaafiis ummanni Oromoo injifannowwan waggoottii darbanii babal’isuun fayyadamummaa siyaasa,hawaas-dinagdeesaa saba,sablamootaafi ummatoota biroo waliin ta’uun cimsee itti fufsiisuu akka qabu hubachisaniiru.
Obbo Muktaar ibsa kennan kanaan injifannoowwan caamsaa 20n galmeeffaman iddoo ol’aanaa kan qabanidha jedhaniiru.
Waggoota 23n darban keessa dhaabbilee kanneen biroo wajjin wal ta’uudhaan DHDUI/ADWUI hiyyummaa maqsuuf qabsaa’aa jira,qabsoo itti fufiinsaan deemsifamaa jiru kanaanis injifannoowwan boonsaan galmeeffamaa akka jiran pireezdaantichi dubbataniiru.
Yaa ta’uutii imala boonsaa kana gufachiisuuf iddoowwan Naannoo Oromiyaa tokko tokkotti qaamoleen maqaa barattootaatiin of gurmeessan jeeqamsa uumuuf yoo socho’anillee hirmaannaa Mootummaafi Ummataatiin too’annoo jala akak oole pireezdaant Muktaar Kadir mirkaneessaniiru.
Gara fuulduraattis Mootummaan Naannoo Oromiyaa guddina diinagdee galmeeffamaa jiru saboota sablammootaafi Ummattoota Itiyoophiyaa wajjin wal ta’uudhaan cimsuudhaan akka itti fufuufi ayyaanni injifannoo Caamsaa 20 wayita ayyaaneeffamuttis injifannoowwan galmeeffaman cimsuudhaaf waadaa galle haaromsuudhaan ta’uu akka qabu pireezdaantichi hubachiisuusaanii Gammachuu Taarikuu gabaaseera.
Tags OPDO TPLF
Previous FDG Ebla 2014 Ka’een Walqabatee Oromoonni 2390 Ta’an Mannneen Hidhaa Adda Addaa Keessatti Dararamaa Jiru.
Next Raayyaa Abbaa Maccaa: Misooma Misoomaa essaatu misoomaa, biyyoon numa soomaa